Antony mahatonga an'i Apple tsy hiova USB-C hahazoana tombony | Avy amin'ny mac aho
Antony mahatonga an'i Apple tsy hiova USB-C hahazoana tombony
Efa niresaka betsaka izahay ary hiresaka ny fanoloana ny seranan-tsofina an'ny Mac vaovao amin'ny port USB-C. Misy ny mahatsara sy maharatsy azy, ary mihabetsaka hatrany ny tombony taterin'ny mpampiasa, mifandraika amin'ny fampidirana an'io fomba fanao io.
Ny iray amin'ireo tohan-kevitr'ireo mpanakorontana ity fampidirana ity dia ny fitsikerana ny orinasa, maniry ny hahazo tombony amin'ny fivarotana fanampiny adaptatera sy tariby mifanaraka amin'ity safidy ity. Eny, tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy, araka ny ho hitantsika etsy ambany Fa maninona i Apple no tsy mampiroborobo an'ity karazana fifandraisana ity?.
Ny iray amin'ireo antony lehibe dia izany Apple dia tsy mpamorona USB-C, noforonin'ny USB Implementers Forum, fikambanana tsy mitady tombombarotra izay, tamin'izany fotoana izany, novolavola Universal Serial Bus niverina tamin'ny 1995.
Marina fa mpikambana ao amin'ny Apple i Apple USB-IF, ny fikambanana mitondra fiara USB-C, saingy tsy ampahany amin'ilay ampahany misy ifandraisany indrindra amin'ny fikambanana izany. Etsy ankilany, orinasa malaza hafa no eo an-tampon'ny orinasa mitondra fiara: miresaka izahay HP, Intel, Microsoft na ny mpanamboatra puce STMicroelectronics. Noho izany, ny fananganana an'ity fifandraisana ity dia neken'ny birao mpitantana tsy miankina, tsy mitady tombom-barotra izay tsy liana amin'ny fahombiazan'ny Apple.
Betsaka ny fanakianana an'i Apple taloha, mifandraika amin'ny fampiasana ny haitao misy azy, ohatra ny fidirana tselatra, raha ny mifanohitra amin'izay no mitranga: Ny USB-C dia fenitra ary azon'ny orinasa rehetra ampiasaina. Inona koa, azonao atao ny mividy sy mampiasa tariby amin'ny marika rehetra, Apple dia manome antoka ny fifandanjana tanteraka sy ny kalitaon'ny fitaovana.
Ny antony fampiasana dia ny halavan'ny fifandraisana izay ahafahana mamonjy toerana, ilay fifandraisana azo ahodina, izay afaka mandefa herinaratra, data ary horonan-tsary amin'ny alàlan'ny tariby tokana. Ny vidin'ny tariby Apple dia avo kokoa noho ny fifaninanana, mamaly hetsika ara-barotra, saingy tsy mametra ny fampiasana ny tariby misy azy manokana.
Ny fehiny Izy io dia ny fampidirana teknolojia vaovao, maivana kokoa ary manana fampisehoana avo kokoa, ho an'ny famoahana kely amin'ny tariby sy adaptatera. Na izany aza, raha tsy afa-po ianao dia afaka mividy maodely teo aloha foana, miaraka amin'ny karazana tapakila hafa. Raha ny amiko dia aleoko miloka amin'ilay vaovao satria manome tombony bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Antony mahatonga an'i Apple tsy hiova USB-C hahazoana tombony
Ny Consumer Reports dia tsy hahitsy amin'ny angona azo tamin'ny andrana nataony tamin'ny MacBook Pro
Ahoana raha toa ka ranomainty elektronika ny Touch Bar an'ny MacBook Pro?